ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားရမယ့် IMDB မြင့် မှုခင်း/ထောက်လှမ်းရေး ဇာတ်လမ်းကောင်း (၃) ခု - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ….ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မှုခင်း နဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (detective films) ရုပ်ရှင်အမျိုးအစား နဲ့ပတ်သက်ပြီး IMDB rating မြင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ မှုခင်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောလိဝုဒ်ကော ဘောလိဝုဒ်ကော ကိုရီးယားကော ပြောပြပေးမှာမို့ မတူညီတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကတွေရဲ့ အရသာအမျိုးမျိုးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် နဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ မှုခင်းရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး IMDB 8.6 အထိ ရထားပါတယ်။ Budget ၁၉ သန်း နဲ့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၂၇၂သန်း ပြန်ရခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
သတ္တိကောင်းပြီး ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ် Clarice ဟာ FBI သင်တန်းကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေသူပါ။ သူမ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရဲရင့်သလို လှပချောမောသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ အထက်လူကြီးဟာ Clarice ကို ငါးစာအဖြစ် အသုံးချဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ထွက်ပြေးနေတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို ဖမ်းဆီးဖို့ အင်မတန်တော်တဲ့စိတ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ လက်တာဆီက သတင်းယူဖို့ပါပဲ။ ဒေါက်တာ လက်တာဟာလည်း သာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပညာရှင် ဖြစ်ပေမဲ့ လူသားစားတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်ကောင်မို့ အရူးထောင်မှာ တိုက်ပိတ်အကျဉ်းချခံထားရသူပါ။
FBIက သိထားရသလောက်တော့ ကွင်းဆက်လူသတ်ကောင်ဟာလည်း ဒေါက်တာလက်တာလို စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ မိန်းကလေးတွေကိုဖမ်းပြီး အရေခွံနွှာကာ သတ်ပစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ထူးဆန်းလှတဲ့စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ဒေါက်တာလက်တာကို မေးမြန်းပြီး သဲလွန်စရယူဖို့ လိုလာပါတယ်။
ဒီအမှုအတွက် ဒေါက်တာလက်တာကို သွားတွေ့ဖို့နဲ့ ကိုင်တွယ်ဖို့ ချောမောပြီးသတ္တိရှိတဲ့ Clarice ကို FBI က ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
Clarice တစ်ယောက် ထူးဆန်းပြီး ရက်စက်လှတဲ့ အမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှာလား?
သွေးအေးလှတဲ့ ဒေါက်တာလက်တာကအနေနဲ့ သူမကို အကူအညီပေးဖို့ အောင်အောင်မြင်မြင် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါ့မလား?
လှည့်စားတတ်တဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေကို သူဘယ်လို ရင်ဆိုင်သွားမှာလဲဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားရမှာပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အကယ်ဒမီ ၅ဆု၊ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ၁ဆု၊ BAFTA ဆု ၂ဆု နဲ့ အခြားဆုပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့တဲ့အထိ ကြောက်ခမန်းလိလိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
(2) My girlfriend is an agent
IMDB 6.4 ရထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မှုခင်း/စုံထောက်ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အက်ရှင်/အချစ်နဲ့ ဟာသကို အချိုးညီညီ ရောနှောထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ။ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပဲ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ကိုရီးယားမှာ စတုတ္ထမြောက် ပရိတ်သတ်အားအပေးဆုံး ရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Sujiဟာ မကြာခင်လက်ထပ်တော့မယ့် သတို့သမီးလောင်းပါ။ သူ(မ)ရဲ့ ချစ်သူကတော့ Jae Joonပါ။ ဒါပေမဲ့ Suji ဟာ မကြာခဏဆိုသလို မပြောမဆို ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာမို့ ကြာလာတဲ့အခါ Jae Joon လည်း စိတ်ကုန်လာပါတော့တယ်။ ရည်းစားကို စိတ်ကုန်လို့ Jae Joon တစ်ယောက် Suji ကိုကော ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပါ စွန့်ခွာသွားပါတော့တယ်။ Jae Joon မသိလိုက်တာက Suji ဟာ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
Suji ဘက်ကတော့ သူ့ကို ထားသွားတဲ့ ချစ်သူဟောင်းကို စိတ်တိုသွားခဲ့ပြီး သူ(မ) မသိတာကတော့ Jae Joon ကလည်း သူမလို လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်နေတာပါပဲ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဌာနချင်း မတူကြလို့သာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပုံစံအမှန် မသိကြတာပါ။
နောက်သုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ Jae Joon တစ်ယောက် ကိုရီးယားပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်လက်စတည်းမှာပဲ သူဟာ နိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့ ပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခုကို ရှင်းရမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ ရုရှားမာဖီးယားတွေဟာ လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေစေနိုင်တဲ့ ဇီဝဗေဒလက်နက်ကို အကျင့်မကောင်းတဲ့ ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်ဆီကနေ ရယူသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအန္တရာယ်များလှတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကို တားဆီးဖို့အတွက် Jae Joon နဲ့ Suji ကို အထက်က တာဝန်ပေးလာတဲ့အခါ ၂ယောက် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တွေ့ကြဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သရုပ်မှန်မပေါ်အောင် လျှို့ဝှက်ထားကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အလွဲတွေကို ဟာသဆန်ဆန် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်သလို အမြဲရန်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီ၂ယောက်က အမှုကို ဘယ်လိုများ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြမှာလဲ? နှစ်ယောက် အတူတူ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြပါ့မလား? သူတို့ရဲ့ တခန်းရပ် အချစ်ဇာတ်လမ်းက နောက်တစ်ဖန် ပြန်မွေးဖွားလာမလား?စတာတွေတော့ ယောင်းတို့ဘာသာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်…..(မှတ်ချက်- ဒီဇာတ်ကားက Rating ပါပါတယ်။ ၁၃နှစ်အောက် မကြည့်သင့်ပါဘူး)
တစ်ချိန်လုံး သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ရတာ မကြိုက်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက်တော့ ဒီဇာတ်ကားက ကြည့်သင့်ပါတယ်။ တချိန်လုံး ရယ်နေရတာ ပါးစပ်ကို မပိတ်ရလို့ပါပဲ။
Related article>>>အရိုတစ်လိုင်းယောင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချစ်ရုပ်ရှင်ကား (၃) ကား
ဒရာမာနဲ့သည်းထိတ်ရင်ဖို ရောယှက်ထားတဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်ထွက် မှုခင်း/ထောက်လှမ်းရေး ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး IMDB 8.1 အထိ ပေးခံထားရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်း နဲ့ ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် ၁၄သန်း ပြန်ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကာလကတ္တားက မီးရထားပေါ်မှာ အဆိပ်ငွေ့တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရထားပေါ်က ခရီးသည်တွေ မရှုမလှ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးဖြစ်ပွားပြီး နောက်၂နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကာလကတ္တားမြို့ကို ဗိုက်ကြီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် လန်ဒန်ကနေ ရောက်ချလာပါတယ်။ သူမအမည်ကတော့ ဗစ်ဒရာ ဘာချီဖြစ်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ ကာလကတ္တားမှာ ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အသက်၃၃နှစ်အရွယ် သူမယောကျာ်း ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ အာနပ်ဘာချီကို လူပျောက်လာရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမယောကျာ်း အာနပ်ဘာချီ ပျောက်သွားပုံကလည်း ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။ National Data Center အတွက် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ NDC ကတော့ သူတို့ဆီမှာ ဒီလိုနာမည်နဲ့ လူမရှိခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗစ်ဒရာတစ်ယောက် မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ သဲလွန်စ မှန်သမျှနောက်ကိုလိုက်ပြီး သူမယောကျာ်းကို လိုက်ရှာရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုရှာနေရင်းနဲ့ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတစ်ယောက်က ဗစ်ဒရာကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။
ဘာလို့ ထောက်လှမ်းရေးက သူမကို ပစ်မှတ်ထားလာတာလဲ? သူမ ယောကျာ်းကရော ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတာလဲ? ထောက်လှမ်းရေးကလူတွေနဲ့ သူမယောကျာ်းရဲ့ ပျောက်ဆုံးမှုက ဆက်စပ်နေလား? သူမခင်ပွန်းကို ပြန်ရှာတွေ့မှာလား? စတာတွေကိုတော့ ယောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ မင်းသားသိပ်မပါဘဲ မင်းသမီးက ဇာတ်လမ်းကို အဓိကဦးဆောင်သွားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်သလို ကာလက္ကတားမြို့ရဲ့ လူသွားလမ်းတွေပေါ်မှာ guerilla-filmmaking နည်းလမ်းသုံးပြီး ရိုက်ထားပါတယ်။
guerilla filmmaking ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာကို လူတွေအာရုံစိုက်မှာစိုးလို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကို ကြိုမပြော/ ခွင့်ပြုချက် ကြိုမတောင်းဘဲ ရှိတဲ့ပစ္စည်း အသေးစားလေးတွေ သုံးပြီးရိုက်ကူးထားတာကို ပြောတာပါ။
ဒါကြောင့် လူသွားလမ်းတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အလှတရားတွေနဲ့ လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်လေး သဘာဝကျတဲ့ရိုက်ချက်တွေကို ရှုစားရမှာပါ။
နောက်ပြီး ဒီရုပ်ရှင်မှာ Plot twist နဲ့ endingက အသက်ပါ။ ဘယ်သူမှ မထင်ထားတဲ့ Plot twist​လည်း ပါတာမို့ မလွတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ မှုခင်း/ထောက်လှမ်းရေးကား တစ်ခုပါပဲ။
ကဲ….ကြည့်ပြီးရင် ကောင်းမကောင်း ပြန်ပြောကြပါဦးနော်….
Reference links: imdb.com asianwiki.com
ဒီစလယျဆုံး ဇာတျရှိနျမွငျ့မွငျ့နဲ့ ရငျထိတျစမှောမို့ စိတျငွိမျဆေးလေးတော့ ဆောငျထားစခေငျြ
ယောငျးတို့ရေ….ဒီတဈခေါကျမှာတော့ မှုခငျး နဲ့ စုံစမျးစဈဆေးရေး (detective films) ရုပျရှငျအမြိုးအစား နဲ့ပတျသကျပွီး IMDB rating မွငျ့တဲ့ ဇာတျလမျးကောငျးလေးတှကေို ညှနျးခငျြပါတယျ။ မှုခငျးရုပျရှငျတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဟောလိဝုဒျကော ဘောလိဝုဒျကော ကိုရီးယားကော ပွောပွပေးမှာမို့ မတူညီတဲ့ ရုပျရှငျလောကတှရေဲ့ အရသာအမြိုးမြိုးကို ခံစားနိုငျမှာပါ။
လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ နဲ့ သညျးထိတျရငျဖို ပေါငျးစပျထားတဲ့ မှုခငျးရုပျရှငျ ဖွဈပွီး IMDB 8.6 အထိ ရထားပါတယျ။ Budget ၁၉ သနျး နဲ့ ရိုကျခဲ့တဲ့ ဒီရုပျရှငျဟာ ၂၇၂သနျး ပွနျရခဲ့တဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
သတ်တိကောငျးပွီး ထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးငယျ Clarice ဟာ FBI သငျတနျးကြောငျးမှာ တကျရောကျနသေူပါ။ သူမ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ ရဲရငျ့သလို လှပခြောမောသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ တဈရကျမှာတော့ အထကျလူကွီးဟာ Clarice ကို ငါးစာအဖွဈ အသုံးခဖြို့ အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ ထှကျပွေးနတေဲ့ ကှငျးဆကျလူသတျသမားကို ဖမျးဆီးဖို့ အငျမတနျတျောတဲ့စိတျပညာရှငျ ဒေါကျတာ လကျတာဆီက သတငျးယူဖို့ပါပဲ။ ဒေါကျတာ လကျတာဟာလညျး သာမနျလူတဈယောကျမဟုတျပါဘူး။ စိတျပညာရှငျ ဖွဈပမေဲ့ လူသားစားတဲ့ စိတ်တဇလူသတျကောငျမို့ အရူးထောငျမှာ တိုကျပိတျအကဉျြးခခြံထားရသူပါ။
FBIက သိထားရသလောကျတော့ ကှငျးဆကျလူသတျကောငျဟာလညျး ဒေါကျတာလကျတာလို စိတ်တဇလူသတျသမားတဈယောကျပါ။ သူဟာ မိနျးကလေးတှကေိုဖမျးပွီး အရခှေံနှာကာ သတျပဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလို ထူးဆနျးလှတဲ့စိတ်တဇလူသတျသမားတဈယောကျကို ဖမျးဆီးနိုငျဖို့အတှကျ ဒေါကျတာလကျတာကို မေးမွနျးပွီး သဲလှနျစရယူဖို့ လိုလာပါတယျ။
ဒီအမှုအတှကျ ဒေါကျတာလကျတာကို သှားတှဖေို့နဲ့ ကိုငျတှယျဖို့ ခြောမောပွီးသတ်တိရှိတဲ့ Clarice ကို FBI က ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။
Clarice တဈယောကျ ထူးဆနျးပွီး ရကျစကျလှတဲ့ အမှုကို ကိုငျတှယျနိုငျမှာလား?
သှေးအေးလှတဲ့ ဒေါကျတာလကျတာကအနနေဲ့ သူမကို အကူအညီပေးဖို့ အောငျအောငျမွငျမွငျ ညှိနှိုငျးနိုငျပါ့မလား?
လှညျ့စားတတျတဲ့ စိတ်တဇလူသတျသမားတှကေို သူဘယျလို ရငျဆိုငျသှားမှာလဲဆိုတာကို ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ရှုစားရမှာပါ။
ဒီရုပျရှငျဟာ အကယျဒမီ ၅ဆု၊ ရှကေမ်ဘာလုံးဆု ၁ဆု၊ BAFTA ဆု ၂ဆု နဲ့ အခွားဆုပေါငျးမြားစှာ ရရှိခဲ့တဲ့အထိ ကွောကျခမနျးလိလိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
IMDB 6.4 ရထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပျရှငျဖွဈပွီး ၂၀၀၉ ခုနှဈကထှကျခဲ့ပါတယျ။ မှုခငျး/စုံထောကျရုပျရှငျအမြိုးအစားဖွဈပွီး အကျရှငျ/အခဈြနဲ့ ဟာသကို အခြိုးညီညီ ရောနှောထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးပါ။ ရုံတငျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာပဲ ဒီရုပျရှငျဟာ ကိုရီးယားမှာ စတုတ်ထမွောကျ ပရိတျသတျအားအပေးဆုံး ရုပျရှငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Sujiဟာ မကွာခငျလကျထပျတော့မယျ့ သတို့သမီးလောငျးပါ။ သူ(မ)ရဲ့ ခဈြသူကတော့ Jae Joonပါ။ ဒါပမေဲ့ Suji ဟာ မကွာခဏဆိုသလို မပွောမဆို ပြောကျပြောကျသှားတတျတာမို့ ကွာလာတဲ့အခါ Jae Joon လညျး စိတျကုနျလာပါတော့တယျ။ ရညျးစားကို စိတျကုနျလို့ Jae Joon တဈယောကျ Suji ကိုကော ကိုရီးယားနိုငျငံကိုပါ စှနျ့ခှာသှားပါတော့တယျ။ Jae Joon မသိလိုကျတာက Suji ဟာ လြှို့ဝှကျထောကျလှမျးရေးတဈယောကျ ဖွဈနတေယျဆိုတာပါပဲ။
Suji ဘကျကတော့ သူ့ကို ထားသှားတဲ့ ခဈြသူဟောငျးကို စိတျတိုသှားခဲ့ပွီး သူ(မ) မသိတာကတော့ Jae Joon ကလညျး သူမလို လြှို့ဝှကျထောကျလှမျးရေး ဖွဈနတောပါပဲ။ အလုပျလုပျတဲ့ ဌာနခငျြး မတူကွလို့သာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပုံစံအမှနျ မသိကွတာပါ။
နောကျသုံးနှဈကွာတဲ့အခါမှာတော့ Jae Joon တဈယောကျ ကိုရီးယားပွနျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ တဈလကျစတညျးမှာပဲ သူဟာ နိုငျငံနဲ့ခြီတဲ့ ပွဿနာအကွီးကွီးတဈခုကို ရှငျးရမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ ရုရှားမာဖီးယားတှဟော လူတှအေစုလိုကျအပွုံလိုကျသစေနေိုငျတဲ့ ဇီဝဗဒေလကျနကျကို အကငျြ့မကောငျးတဲ့ ကိုရီးယားသိပ်ပံပညာရှငျဆီကနေ ရယူသှားလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုအန်တရာယျမြားလှတဲ့ ဖွဈရပျဆိုးကို တားဆီးဖို့အတှကျ Jae Joon နဲ့ Suji ကို အထကျက တာဝနျပေးလာတဲ့အခါ ၂ယောကျ နောကျတဈကွိမျ ပွနျတှကွေ့ဖို့ အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သရုပျမှနျမပျေါအောငျ လြှို့ဝှကျထားကွတဲ့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ထောကျလှမျးရေး အလှဲတှကေို ဟာသဆနျဆနျ ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈသလို အမွဲရနျဖွဈနတေဲ့ ဒီ၂ယောကျက အမှုကို ဘယျလိုမြား ကိုငျတှယျနိုငျကွမှာလဲ? နှဈယောကျ အတူတူ အလုပျလုပျနိုငျကွပါ့မလား? သူတို့ရဲ့ တခနျးရပျ အခဈြဇာတျလမျးက နောကျတဈဖနျ ပွနျမှေးဖှားလာမလား?စတာတှတေော့ ယောငျးတို့ဘာသာ ကွညျ့ရှုလိုကျပါနျော…..(မှတျခကျြ- ဒီဇာတျကားက Rating ပါပါတယျ။ ၁၃နှဈအောကျ မကွညျ့သငျ့ပါဘူး)
တဈခြိနျလုံး သညျးထိတျရငျဖိုဖွဈရတာ မကွိုကျတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျတော့ ဒီဇာတျကားက ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ တခြိနျလုံး ရယျနရေတာ ပါးစပျကို မပိတျရလို့ပါပဲ။
Related article>>>အရိုတဈလိုငျးယောငျးတို့အတှကျ အကောငျးဆုံးအခဈြရုပျရှငျကား (၃) ကား
ဒရာမာနဲ့သညျးထိတျရငျဖို ရောယှကျထားတဲ့ ၂၀၁၂ခုနှဈထှကျ မှုခငျး/ထောကျလှမျးရေး ဘောလီးဝုဒျရုပျရှငျဖွဈပွီး IMDB 8.1 အထိ ပေးခံထားရပါတယျ။ ဒီရုပျရှငျဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁.၁ သနျး နဲ့ ရိုကျခဲ့ပမေယျ့ ၁၄သနျး ပွနျရတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
ကာလကတ်တားက မီးရထားပျေါမှာ အဆိပျငှတေို့ကျခိုကျမှု တဈခုဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ရထားပျေါက ခရီးသညျတှေ မရှုမလှ သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျဆိုးကွီးဖွဈပှားပွီး နောကျ၂နှဈကွာသှားတဲ့အခါမှာတော့ ကာလကတ်တားမွို့ကို ဗိုကျကွီးသညျအမြိုးသမီးတဈယောကျ လနျဒနျကနေ ရောကျခလြာပါတယျ။ သူမအမညျကတော့ ဗဈဒရာ ဘာခြီဖွဈပွီး ဆော့ဖျဝဲ အငျဂငျြနီယာတဈယောကျပါ။ သူမဟာ ကာလကတ်တားမှာ ရုတျတရကျ ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ အသကျ၃၃နှဈအရှယျ သူမယောကျြား ဆော့ဖျဝဲအငျဂငျြနီယာ အာနပျဘာခြီကို လူပြောကျလာရှာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမယောကျြား အာနပျဘာခြီ ပြောကျသှားပုံကလညျး ဆနျးကွယျလှပါတယျ။ National Data Center အတှကျ အလုပျတဈခုလုပျဖို့ ထှကျသှားခဲ့ပမေဲ့ NDC ကတော့ သူတို့ဆီမှာ ဒီလိုနာမညျနဲ့ လူမရှိခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဗဈဒရာတဈယောကျ မပေါ့မပါးကွီးနဲ့ သဲလှနျစ မှနျသမြှနောကျကိုလိုကျပွီး သူမယောကျြားကို လိုကျရှာရပါတော့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီလိုရှာနရေငျးနဲ့ လြှို့ဝှကျထောကျလှမျးရေးတဈယောကျက ဗဈဒရာကို လုပျကွံသတျဖွတျဖို့ ကွိုးစားလာခဲ့ပါတယျ။
ဘာလို့ ထောကျလှမျးရေးက သူမကို ပဈမှတျထားလာတာလဲ? သူမ ယောကျြားကရော ဘယျလိုဖွဈပွီး ပြောကျဆုံးသှားတာလဲ? ထောကျလှမျးရေးကလူတှနေဲ့ သူမယောကျြားရဲ့ ပြောကျဆုံးမှုက ဆကျစပျနလေား? သူမခငျပှနျးကို ပွနျရှာတှမှေ့ာလား? စတာတှကေိုတော့ ယောငျးတို့ကိုယျတိုငျပဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျပါနျော။
ဒီဇာတျကားဟာ မငျးသားသိပျမပါဘဲ မငျးသမီးက ဇာတျလမျးကို အဓိကဦးဆောငျသှားတဲ့ ရုပျရှငျဖွဈသလို ကာလက်ကတားမွို့ရဲ့ လူသှားလမျးတှပေျေါမှာ guerilla-filmmaking နညျးလမျးသုံးပွီး ရိုကျထားပါတယျ။
guerilla filmmaking ဆိုတာ ရုပျရှငျရိုကျနတောကို လူတှအောရုံစိုကျမှာစိုးလို့ ရုပျရှငျရိုကျမယျဆိုတာကို ကွိုမပွော/ ခှငျ့ပွုခကျြ ကွိုမတောငျးဘဲ ရှိတဲ့ပစ်စညျး အသေးစားလေးတှေ သုံးပွီးရိုကျကူးထားတာကို ပွောတာပါ။
ဒါကွောငျ့ လူသှားလမျးတှေ၊ ပတျဝနျးကငျြ အလှတရားတှနေဲ့ လူတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အတျောလေး သဘာဝကတြဲ့ရိုကျခကျြတှကေို ရှုစားရမှာပါ။
နောကျပွီး ဒီရုပျရှငျမှာ Plot twist နဲ့ endingက အသကျပါ။ ဘယျသူမှ မထငျထားတဲ့ Plot twistလညျး ပါတာမို့ မလှတျတမျး ကွညျ့သငျ့တဲ့ မှုခငျး/ထောကျလှမျးရေးကား တဈခုပါပဲ။
ကဲ….ကွညျ့ပွီးရငျ ကောငျးမကောငျး ပွနျပွောကွပါဦးနျော….
Tags: #fun #movie reviews, films, high imdb, Movie review, rating
Aye Mon Kyaw April 3, 2019